It is me. Ko Niknayman.: အသေလှပချင်ရင်၊ ဘ၀အကူးကောင်းချင်ရင်၊ မိုက်ကြွေးသက်သာချင်ရင်။
Posted by Ko Niknayman at 8:27 AM